Jowhar.com : Somali Leader News - News: Golaha sare ee Culumaa'udiinka Ahlu Sunna oo soo dhoweeyay magaalooyinki laga saaray Shabaab
April 25 2014 03:26:41
Golaha sare ee Culumaa'udiinka Ahlu Sunna oo soo dhoweeyay magaalooyinki laga saaray Shabaab
Bayaan ka soo baxay Golaha sare ee Culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljameeca salaada Jimcaha kaddib ayaa looga hadlay xaaladda wadanka, gaar ahaan howlgalada ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan gobolada dalka.
Sheekh Cabdi Xuseen C/llaahi oo ku saxiixnaa bayaanka ka soo baxay Golaha Sare ee Culumaa'udiinka Ahlu Sunna ayaa lagu caddeeyay sida Goluhu ula dhacsan yahay isla markaana u taageerayo howlgalada ka socda gobolada dalka ee looga xoreynayo ururka Al-Shabaab.
"Guulaha ciidamada Dowladda iyo AMISOM ay ka gaarayaan dagaalka lagula jiro kooxaha nabad-diidka ah waa mid mudan in la taageero oo la soo dhoweeyo, qof kasta oo Soomaali ahna waxaa waajib ku ah inuu doorkiisa ka qaato" ayaa lagu yiri bayaanka Golaha Sare ee Culumaa'udiinka Ahlu Sunna.
Dhinaca kale Culumada Ahlu Sunna ayaa ugu baaqay dhammaanba shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda degan gobolada ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab inay is dejiyaan, isla markaana u diyaar garoobaan soo dhoweynta ciidamada huwanta ee dhiigooda u huraya sidii ay dadkooda heeryada iyo gumeystayaasha madow uga dul qaadi lahaayeen.
Bayaanka ka soo baxay Golaha sare ee Culumaa'udiinka Ahlu Sunna ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo is garabsanaya ay guulo lixaad leh ka gaareen howlgalada Al-Shabaab looga saarayo gobolada dalka, iyagoona wax ka yar muddo toddobaad ah kula wareegay in ka badan afar degmo oo ku taala gobolka Bakool.
Golaha Culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa ku booriyay shacabka degan meelaha laga xoreeyay kooxaha argagixisada ah ee Shabaab iyo Al-Qaacida inay degaanadooda dib ugu soo laabtaan isla markaana ka codsaday Dowladda iyo hay'adaha gargaarka inay gurmad samata bixin oo degdeg ah lala soo gaaro shacabka dhibaateysan.
0 Comments · 229 Reads
Jowhar.com753,993 unique visits